အလှအပ - ကကြည့်ရှုလော့များ၏မျက်စိရှိပါသနည်း သူ့ဟာသူအတွက်ခရီးသွားလာရန်အချိန်
အလှအပ - ကကြည့်ရှုလော့များ၏မျက်စိရှိပါသနည်း
အဆိုပါခြင်္သေ့ဟာမြင်းကျားခြောက်သွေ့တဲ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်လုံခြုံစွာဆွတ်ရှာဖွေနေ, ချုံဖုတ်ထဲမှာ crouched ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသားစားရှေ့ဆက်မယ့်လူရှုပ်နှင့်အတူခုန်များနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မြေပြင်ကနေအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူခလုတ်ဆွဲ, သူမ၏ကြွက်သားခြေထောက်ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့အလှအကြောင်းပြောဆို။
အဆိုပါခြင်္သေ့တစ်ဦးဆင်းလှသောအစ်မ, ခမ်းနားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အလှအပကိုလည်းဒီတော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက်ပျက်စီးလွယ်ခြင်းနှင့်ပေါ်ပင်တဲ့ရောင်စုံပန်းပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လှပသော, ညာ - ဟာနေဝင်ချိန်အတွက်စုံတွဲမေတ္တာရှင်?
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အမွှေးအကြိုင်နှင့်သူတို့၏ရောင်စုံပန်းပွင့်, နှစ်သက်တော်မူ၏။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စရပ်များဘုံထဲမှာနည်းနည်းရှိသည်, သေးကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူစကားလုံးက "အလှတရား" ပေါင်းသင်း။
အလှအပအနေနဲ့စိတ္တဇအယူအဆနှင့်အကြှနျုပျသညျ၏မျက်စိ၌တည်ရှိ၏။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သလှပသောအဖြစ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တဝါခံစားရတယ်။ အလှအပမျက်မှောက်သောမျက်စိများ၏အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်အစပျိုးသောခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အကြှနျုပျသညျ၏မျက်စိထဲမှာလှပမှု၏နိယာမတစျဦးသည်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီသဘောနဲ့, လူတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်တိုင်ကတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလှတရားရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစအတွင်းစိတ်အလှတရား၏ပြော၏။
ဒါကအပြုံးတစ် seductive တစ်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့သောလက်ဟန်ခြေဟန်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ကြိမ်တည်းမှာဤအရာတို့ကိုအပေါငျးတို့သ။ လူတိုင်းရဲ့လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူ၏အလှတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်လိုသည်။
တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အသီးအသီးကိုယ်နှိုက်အတွက်ပထမဦးဆုံးနှင့်ထိုက်တန်အသိအမှတ်မပြုဖို့ရှိပါတယ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောအလှအပနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်ကြဉ်းရန်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်တခြားလူအများအပြားစိတ်ခံစားမှုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဆောင်မှုကျေးဇူးတော်နှင့်ကြော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘုံကလူတစ်ဦးကောင်းတဲ့လူကိုစေသည်ဤအထူးဆွဲဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကယောက်ျား၏ကျက်သရေနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်။
လူတိုင်းရဲ့လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဖြစ်လျက်ရှိလှပသောဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းများတွင်တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခွအေနပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်၌သူ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြည့်စုံသည်အလွန်တစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်။
, ဒီအသိအမှတျပွုထုတျဖျောပွောဖို့နဲ့အားလုံးမှာနထေိုငျဖို့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ သာဆှဖှေဲ့နှင့်စိတ်အားထက်သန်နေဖြင့်သင်ယူနိုင်ထားတဲ့အနုပညာ။
သဘာဝအလှကုန် - ကအိုမင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်အဖြစ်
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူငယ်၏အထဲကလာမယ့် - ငါသည်အဘယ်သို့ပြုသင့်သနည်း
ကော်ဖီ - နာမည်ကျော်ပူသောက်များ၏သမိုင်း
One ပေါ်တွင်ထင် "အလှတရား - သူမကအကြှနျုပျသညျ၏မျက်စိ၌တည်ရှိ၏?"
4 ။ 2018 မှနိုဝင်ဘာလ 19: 40 နာရီ
ငါ့အဘို့, အလှအပအမြဲအတွင်းစိတ်အရောင်တစ်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူသည်ကိုယ်နှိုက်နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်းအပြင်ပန်းဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်စေတနာစိတ်နှင့်ဆောင်ရွက်သည်။ ပိုပြီးရုံအသွင်အပြင်ထက်အခြားလူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။